Carrie Underwood မွ ဒုတိယေျမာက္ ရင္ေသြးေလးေမြးဖြား။ – SoShwe
မိန်းမ ၉ ယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဘရာဇီးမော်ဒယ်။
ကမ္ဘာပေါ်က ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ရိုးရာအသုဘအခမ်းအနား။
မိုးကြိုးအပစ်ခံရပေမယ့်လည်း ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး။
Covid ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွါးနေစဉ်အတွင်း ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကလေးငယ်။
ကိုရီးယားသမိုင်းကြောင်းကို လူ့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ဘဝမှန်တွေနဲ့ သရုပ်ဖော်ပြထားတဲ့ “Squid Game”
အဆော့သန်တဲ့ ကြောင်လေးတွေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာလေးများ။
နည်းပြအသစ်နဲ့အဆင်ပြေအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ ရော်နယ်ဒို။
Jennifer Lopez နဲ့ ပြန်လည် ပေါင်းစည်းခွင့်ရပြီးနောက် သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတဲ့ မင်းသားကြီး Ben Affleck
အရက်အလွန်အကျွံမူးပြီး ရဲကားအနောက်ခန်းမှာ ချစ်တင်းနှောခဲ့တဲ့ စုံတွဲရဲ့အဖြစ်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်ရဲ့ အလုံခြုံဆုံးနဲ့ အန္တရာယ်အကင်းဆုံးသော မြို့တော်များ။
Home/Entertainment/Carrie Underwood မွ ဒုတိယေျမာက္ ရင္ေသြးေလးေမြးဖြား။
Carrie Underwood မွ ဒုတိယေျမာက္ ရင္ေသြးေလးေမြးဖြား။
admin January 25, 2019	Entertainment Leaveacomment
Ryan Reynolds ရဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုမကြည့်ဘူးလို့ အံ့အားသင့်ဖွယ်ပြောကြားလိုက်တဲ့ Gerard Butler
အေမရိကန္ ကန္းထရီးအဆိုေတာ္ ကယ္ရီမွ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ဒုတိယေျမာက္ သားေယာက်ာ္းေလးကို ေမြးဖြားခ့ဲပါတယ္။ ေမြးဖြားၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာမွာေတာ့ Instagram မွာ သူ႕အမ်ိဳးသားက ကေလးခ်ီေနတ့ဲပုံကို “ Jacob Bryan Fisher ေလးဟာ တနလာၤေန႕ မနက္ခင္းေလးမွာပဲ လူ႕ေလာကထဲသို႕ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေရာက္ရွိလာပါတယ္ ” ဆိုၿပီး ပို႕စ္တင္ခ့ဲပါတယ္။
ဒုတိယေျမာက္ရင္ေသြးေလးဟာ ပထမသားဦးေလးျဖစ္တ့ဲ Isaiah Michael နဲ႕ အသက္ (၃) ႏွစ္သာ ကြာၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ Country သီခ်င္းဆုေပးပြဲအခမ္းအနားမွာ ကယ္ရီမွ သူမမွာ ဒုတိယေျမာက္ ကုိယ္ဝန္ရွိေနၿပီဆိုတာကို တရားဝင္ေၾကျငာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးဖြားခါနီးအခ်ိန္တုန္းကလည္း သူမရဲ႕ ကေလးေတြနဲ႕အတူ ရိုက္ထားတ့ဲဓာတ္ပုံကို Instagram မွာ တင္ခ့ဲပါေသးတယ္။
Kicking off 2019 right…Me and my boys cuddled up watchingamovie. Yes, I’m wearing Mike’s shirt. 😬 #LettingItAllHangOut 🤰
A post shared by Carrie Underwood (@carrieunderwood) on Jan 1, 2019 at 11:45am PST
Previous ???????????????????? ????????????????? ?? ????
Next Niall Horan ??? Liam Payne ?????? One Direction ???????? ??????????????????? ????????
ဂြိုဟ်သားတွေတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ထားကြတဲ့ နာမည်ကျော်များ။
ဂြိုဟ်သားတွေ အမှန်တကယ်ရှိ၊ မရှိဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူတွေကြားထဲမှာ အမြဲတမ်း အငြင်းအခုံတွေ ရှိနေရပေမယ့် အချို့သောနာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေကတော့ ဂြိုဟ်သားတွေ အမှန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကို လက်ခံယုံကြည်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ထားတဲ့ …